nonsubstance (သို့) အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်လက်တွေ့အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစဉ်းစားမှုများ (၂၀၁၇) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌ Porn တွင်
nonsubstance သို့မဟုတ်အပြုအမူစှဲ (2017) နှင့် ပတ်သက်. လက်တွေ့အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါထည့်သွင်းစဉ်းစား
ဆွေးနွေးမှုများကို Clin neuroscience။ 2017 စက်တင်ဘာ; 19 (3): 281-291 ။
ဘာသာစကား: အဂၤလိပ္ | စပိန္ | ပြင်သစ်
မာ့ခ် N. Potenza, MD, Ph.D*
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းလောင်းကစား၊ ဂိမ်းနှင့်လိင်စသည့်အရာ ၀ တ္ထုအသုံးမပြုသည့်အပြုအမူများသည်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ချေများကိုပိုမိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလာသည်။ ဤဆောင်းပါး၌၊ ငါမကြာသေးမီကသမိုင်းနှင့်ပစ္စည်းမဟုတ်သောသို့မဟုတ်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုအခြေအနေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါမည်။ အဓိကအာရုံစိုက်ရာမှာလောင်းကစားခြင်းနှင့်လောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာရောဂါများပါ ၀ င်လိမ့်မည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်လက်ရှိအရာ၏လက်ရှိ (ပဉ္စမ) ထုတ်ဝေမှု၏အဓိကစာသားတွင်ဖော်ပြထားသည့်ပစ္စည်းသည်မဟုတ်သောစွဲလမ်းစေသောရောဂါဖြစ်သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders (DSM-5) ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်။ အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းရောဂါ၊ DSM-5 အပိုဆောင်းသုတေသနပြုရန်လိုအပ်သည့်အခြေအနေများကိုဖော်ပြသည့်အပိုင်းကိုအင်တာနက်စွဲလမ်းခြင်းသဘောတရားကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်လာမည့် (၁၁) ကြိမ်မြောက်ထုတ်ဝေချက်တွင်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများကိုမည်သို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်နည်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ () အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရောဂါများအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း (ICD-11).
keywords: စိုးရိမ်စိတ်အမူအကျင့်စွဲ, DSM, ICD-11, မဟုတ်သောပစ္စည်းစွဲ
“ စွဲ” ဟူသောဝေါဟာရသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပြောင်းလဲသွားသည်။ ၎င်းသည်လက်တင်စကားလုံးမှဆင်းသက်လာသည်။ ဆေးထည့်၊ "ခညျြနှောငျ" သို့မဟုတ် "အားဖြင့်ကျွန်" ဟုအဓိပ္ပာယ်နှင့်၎င်း၏ကန ဦး ရေးဆွဲရာတွင်အတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။1 အလယ်ခေတ်တစ်လျှောက်လုံးတွင်၎င်းသည်“ ဓလေ့ထုံးတမ်းများ” သို့မဟုတ်“ penchants” နှင့်ဆက်နွယ်သောပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုအပြုအမူများနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ဘဲရှိနေခဲ့သည်။1 ၁၇၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုရည်ညွှန်းသည် (ဥပမာ - ဆေးရွက်ကြီးနှင့် ပတ်သက်၍) ကိုသတိပြုမိခဲ့ပြီး ၂၀ ရာစုတစ်လျှောက်ဘိန်းနှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုအလွန်အကျွံ / ပြaticနာများသုံးစွဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တတိယအကြိမ်ထုတ်ဝေမှုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါနှင့်ပတ်သက်သောရောဂါနှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလက်စွဲ (DSM-III-R)၊ ၀ တ္ထု - အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါ (SUDs) ကော်မတီကစွဲချက်ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။1,2 သို့သော်ထိုအချိန်ကတည်းကလူတစ် ဦး ချင်းစီသည်မူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်သောအပြုအမူများ (ဥပမာ၊ လောင်းကစားခြင်း) ကိုသဘာဝအားဖြင့်စွဲလမ်းစေသည့်အရာဟုသတ်မှတ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိမေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။ အချို့သောစာရေးဆရာများသည်ဆိုးရွားသည့်အကျိုးဆက်များရှိသော်လည်းအပြုအမူ၌ဆက်လက်ပါ ၀ င်မှု၊ အပြုအမူတစ်ခုတွင်ပါ ၀ င်မှုအပေါ်ချုပ်တည်းမှုလျော့နည်းသွားခြင်း၊3 အကယ်၍ ၎င်းဒြပ်စင်များကိုစွဲလမ်းမှု၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများဟုမှတ်ယူပါကစွဲလမ်းမူဘောင်သည်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာများထက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအပြုအမူများနှင့်သက်ဆိုင်နိုင်သည်4
ဤထောင်စုနှစ်၏ပထမဆယ်စုနှစ်တွင်၊ မပါ ၀ င်သောအပြုအမူဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုစွဲလမ်းစေသောအယူအဆအဖြစ်ယူဆရန်ထောက်ခံမှုတွင်သိသာသောပြောင်းလဲမှုရှိခဲ့သည်။ Constance Holden မှဆောင်းပါးနှစ်ခုကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည် သိပ္ပံ ဒီအပြောင်းအလဲများကို bookend ။5,6 ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်သူမသည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများရှိမရှိနှင့်ထိုကဲ့သို့သော neuroimaging ကဲ့သို့သောသိပ္ပံနည်းကျနည်းစနစ်အသစ်များသည် SUDs နှင့်ဥပမာအားဖြင့်ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာစနစ်အတွက်သက်သေအထောက်အထားများရှိမရှိရှိမရှိမေးမြန်းခဲ့သည်။ ဒုတိယဆောင်းပါးတွင်သူမသည် PG ကို SUDs များနှင့်အတူ Substance နှင့်ဆက်စပ်သောနှင့်စွဲလမ်းစေသောရောဂါများကိုပြန်လည်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းကိုကြေငြာသည်။ DSM-5 ။7ဤပြန်လည်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသည်ကောက်ယူရရှိခဲ့သောစာပေများကိုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံသည် DSM-5 PG နှင့် SUDs နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်သုတေသန workgroups8 နှင့် PG နှင့် obsessive-compulsive ရောဂါ (OCD) ။9 အဆိုပါအချက်အလက်များသည် PG နှင့် SUDs အကြားနီးကပ်တူညီကြောင်းညွှန်ပြသော်လည်း၊ PG နှင့် OCD အကြား၊ ရောဂါရှာဖွေခြင်းစံသတ်မှတ်ချက်များ၊ လက်တွေ့လက္ခဏာများ၊ လူမှုရေးအချက်များ၊ ပူးတွဲဖြစ်ပေါ်နေသောမမှန်မှုများ၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအင်္ဂါရပ်များ၊ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ဇီဝဓာတုဗေဒ၊ neurocircuitry၊ ကုသမှု။8,9 ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်, "ရောဂါဗေဒ" ဟူသောစကားလုံးနှင့်ဆက်စပ်သောအလားအလာလျှော့ချရန် "လောင်းကစားမှုရောဂါ" [GD] ဟုအမည်ပြောင်းထားသော) PG SUDs နှင့်အတူပြန်လည်ခွဲခြားခဲ့သည် DSM-5, အခြားနေရာများတွင်မပါ ၀ င်သော Impulse Control Disorders ၏အမျိုးအစားခွဲခြားထားသည့်အခြားရောဂါများသည် Impulse-Control Disorders အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရခြင်းသို့မဟုတ်အခြားနေရာများတွင်ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။7 အထူးသဖြင့် trichotillomania ကို OCD နှင့်အတူထပ်မံခွဲခြားထားသည် -“ Obsessive-Compulsive and ဆက်စပ် Disorders” အမျိုးအစား။7 တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ “ အခြားနေရာများတွင်မသတ်မှတ်ထားသော Impulse Control Disorders” အမျိုးအစားကို“ Disruptive, Impulse-Control and Conduct Disorders” ဟုအမည်ပြောင်းခဲ့သည်။ လူမှုရေးဆိုင်ရာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါ၊ အမူအကျင့်မူမမှန်ခြင်းနှင့်အတိုက်အခံစိတ်ခံစားမှုရောဂါကို kleptomania၊ ရောဂါ။7 ဤအချက်အလက်များနှင့်ကော်မတီမှမောင်းနှင်သည့်နည်းအားဖြင့်အခြားသူများ၏အခွင့်အရေးများကိုချိုးဖောက်သည့်အပြုအမူများ (ဥပမာ - ကျူးကျော်ခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဖျက်ဆီးခြင်း) နှင့် / သို့မဟုတ်ပါ ၀ င်သည့်ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာပြcontainingနာများပါ ၀ င်သောအမျိုးအစားသည်ပိုမိုစိတ် ၀ င်စားစရာဖြစ်လာသည်။ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအားလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းများနှင့်သိသိသာသာပconflictိပက္ခဖြစ်စေနိုင်သည်။7
အကြောင်းပြချက်များအတွက် PG / GD ကိုရှေ့ပြေးပုံစံအမူအကျင့်စွဲမှုဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ကအခြားအပြုအမူစွဲထက်ပိုမိုလေ့လာခဲ့ပြီးဤပြန်လည်သုံးသပ်၏အာရုံဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းတွင် SUD မပါဝင်သည့်တစ်ခုတည်းသောတစ်ခုဖြစ်သည် DSM-5 လက်စွဲစာအုပ်၏“ ပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်သောနှင့်စွဲလမ်းစေသောရောဂါများ” အပိုင်းကိုလေ့လာပါ။7 လက်တွေ့ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် PG / GD နှင့် SUD များသည်လက်တွေ့နှင့်အသိုင်းအဝိုင်းနမူနာများတွင်ပူးတွဲဖြစ်ပျက်မှုများကိုပြသသည် (အလားတူဖွံ့ဖြိုးမှုပုံစံ) (ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူငယ်လူကြီးများနှုန်းမြင့်ခြင်းနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင်အနိမ့်ဆုံးနှုန်းများ) တို့နှင့်အတူမျိုးရိုးဗီဇနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပံ့ပိုးမှုများကိုမျှဝေသည် အမွှာလေ့လာမှုများနှင့် neurobiological အဆင့်ဆင့်မှာတူညီအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုသရုပ်ပြပါ။8,10,11 အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံသည့်ခြားနားချက်များသည် PG / GD နှင့် SUD တို့ကိုချိတ်ဆက်ပုံရသည် (Box ကို 1) ။ 12,20
ထောင့်ကွက် 1 ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား / လောင်းကစားရောဂါနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အတွက်အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်း:
မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်အစပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသော“ တယ်လီစကုပ်” ဖြစ်စဉ်ကိုရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း / လောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာရောဂါလေ့လာမှုအချို့တွင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။12-16 ဤဖြစ်စဉ်ကိုအစပိုင်းတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်ဖော်ပြခဲ့ပြီး၊ စွဲစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူစတင်ခြင်းနှင့်ပြproblemနာတစ်ခု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကြားရှိယောက်ျားများထက်ယောက်ျားများသည်အချိန်တိုတောင်းသောကာလရှိခြင်းပါဝင်သည်။17 ဒီလိင်ဆက်ဆံမှုခြားနားချက်၏သိပ္ပံပညာကိုမသိပေမယ့်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုသုတေသနပြုပြီးပါပြီ။ လောင်းကစားခြင်းရောဂါအတွက်မျိုးရိုးဗီဇနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများသည်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။18,19 မျှဝေထားသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များသည်အမျိုးသမီးများအတွက်လောင်းကစားခြင်း၏သက်တမ်းကိုပိုမိုအထောက်အကူပြုသည်၊ မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအချက်များသည်အမျိုးသားများအတွက်ပိုမိုအထောက်အကူပြုသည်။20 ပထမ ဦး ဆုံးသောက်သုံးသောအသက်သည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသောအမျိုးသားများတွင်အရက်သုံးစွဲမှုစတင်ခြင်းအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံတစ်မျိုးပေါ်ထွက်လာသည်။20 သို့သော်အမျိုးသမီးများသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအချက်များအားမျှဝေခြင်းကပထမအချိုရည်တွင်အသက်အရွယ်သို့အကျိုးသက်ရောက်စေသော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည်ပထမလောင်းကစားတွင်အသက်နှင့်သက်ဆိုင်သောသူများနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ ပထမ ဦး ဆုံးသောက်ခြင်းနှင့်ပထမ ဦး ဆုံးလောင်းကစားခြင်း၏အသက်အရွယ်, ဤအချက်များလည်းဆက်စပ်မှုမရှိသောဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ။20 အတူတကွတွေ့ရှိချက်များအရလောင်းကစားခြင်းနှင့်အရက်သောက်သုံးခြင်းအပြုအမူများနှင့်မသန်မစွမ်းမှုများတွင်လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုနှစ်ခုလုံးကိုအကြံပြုသည်။ ၎င်းဖြစ်ရပ်များနှင့်ပတ်သတ်သောတိကျသောပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအချက်များအားထပ်မံရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။
PG နှင့် SUD အကြားတူညီသည့်အချက်များမှာလက်တွေ့ဆောင်ရွက်မှုများအတွက်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် Gamblers Anonymous သည် Alcoholics Anonymous အပြီးလုပ်သောပုံစံကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ရနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုသမှုနှင့် တွဲဖက်၍ ရလဒ်ကောင်းများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။21 SUDs ကိုကုသရာတွင်ထိရောက်မှုရှိသောအပြုအမူဆိုင်ရာကုထုံးများသည် PG / GD အတွက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, SUDs ၏ကုသမှုတွင်အောင်မြင်စွာအသုံးပြုသောသိမြင်မှုအပြုအမူကုထုံး (CBT) ချဉ်းကပ် PG / GD များအတွက်အဆင်ပြေအောင်နှင့်ထိရောက်သောဖြစ်ပြသခဲ့သည်။21 SUD များအတွက်ခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူဆေးဝါးကုထုံး PG / GD များအတွက်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ -controlled ကျပန်းလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများတွင်အပြုသဘောဆောင်သောရလဒ်များကိုသရုပ်ပြပါပြီ။ မှတ်သားစရာမှာ naltrexone သည် opioid-receptor antagonist ဖြစ်ပြီးအရက်သေစာနှင့် opioid- အသုံးပြုမှုရောဂါများအတွက်လက္ခဏာများပါသည့်အခြား opioid-receptor ရန်ဘက်ဖြစ်သူ nalmefene ကဲ့သို့သောကျပန်းလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများတွင်ရလဒ်များအရအိပ်ယာထက်ပိုမိုသာလွန်မှုကိုပြသခဲ့သည်။21 သို့သော်နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရန်နှင့် SUDs နှင့်အရေးကြီးသောဆက်နွယ်မှုများကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်သောတုံ့ပြန်မှုများတွင်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ PG ရှိသူများအကြားမိသားစုသမိုင်းအရအရက်စွဲသူများသည် opioid-receptor ရန်လိုသူများအားတုံ့ပြန်သူများက opioid ထံမှထိရောက်သောပစ်မှတ်ထားသောအရက်သုံးစွဲမှုရောဂါများနှင့် PG များအကြားဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလက္ခဏာများရှိနိုင်ကြောင်းအကြံပြုသည်။ -receptor ရန်။22 ဤတွေ့ရှိချက်များသည်အမေရိကန်စစ်ပြန်များ၏အရက်သုံးစွဲမှုရောဂါများနှင့်စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာပြdisနာများပါ ၀ င်သည့်အမေရိကန်စစ်မှုထမ်းများ၏လေ့လာမှုမှတွေ့ရှိချက်များနှင့် PG လက္ခဏာများရှိသူများသည်အရက်သောက်ခြင်း၌လက်တွေ့တိုးတက်မှုရှိကြောင်းပြသရန်အလားအလာနည်းပါးသော်လည်း၊ ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှု naltrexone နဲ့ကုသတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိမခံခဲ့ရပါဘူး။23 အရက်သောက်သုံးသောရောဂါများကဲ့သို့ပင် opioidreceptor ရန်လိုသူများသည်တုန်ခါမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။22,24 သို့သော် PG ကိုကုသရန်လိုအပ်သည့် naltrexone ကိုစစ်ဆေးသည့်အရရလဒ်အနေဖြင့်μ-opioid receptor (A118G) တွင်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာ coding ၏အလုပ်လုပ်နေသောမျိုးရိုးဗီဇပိုလီမာဖစ်သည်။ OPMR1 အရက် - အသုံးပြုမှုမမှန်အတွက်အရက် -related ကုသမှုရလဒ်ကိုဆက်စပ်ခဲ့ပြီးကြောင်းဗီဇ)25 လောင်းကစား -related ရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်မခံခဲ့ရပါဘူး။26 သိမြင်မှုဆိုင်ရာအမူအကျင့်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုနှင့် ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလေ့လာမှုများအရ PG / GD နှင့်အရက်သုံးစွဲမှုမမှန်မှုများအကြားတူညီမှုနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုတွေ့ရှိရသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အရက်သောက်သုံးခြင်းနှင့်လောင်းကစားခြင်းပြwithနာများရှိသည့်အုပ်စုနှစ်စုလုံးသည်စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှိုင်းယှဉ်မှု (HC) ဘာသာရပ်များနှင့်ကွဲပြားကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ စဉ်းစားခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်၏ရှုထောင့်။27 ဤတွေ့ရှိချက်များသည် neurobiological ဆက်နွယ်မှုများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည်။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှုတစ်ခုအရ PG ရှိသူများသည်ကိုကင်းမှီဝဲသူ (CD) ရှိသူများကဲ့သို့အလယ်တန်း (ဖြတ်ကူးခြင်း) အမျှင်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အဖြူရောင် - ဆက်စပ်သည့်အစီအမံများနှင့်အရက်သောက်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပြသခဲ့သည်။ အသုံးပြုမှုရောဂါမူလတန်းဝေစာများတွင်ပိုမိုသိသာခဲ့ကြသည်။28 PG နှင့် SUDs များ၌ဆေးများအပြင်၊ nutraceuticals (ဆေးများအပြင်အစားအသောက်ဖြည့်စွက်ဆေးများ) ကိုလည်းပါ ၀ င်သည်။ နှစ်ခုလုံး (Box 2) ။ 29-37
ထောင့်ကွက်2။ Nရောဂါဗေဒလောင်းကစား / လောင်းကစားရောဂါနှင့်ပစ္စည်း - အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါကုသမှုအတွက် -acetylcysteine:
ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်း / လောင်းကစားခြင်းရောဂါနှင့်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုမမှန်မှုများအကြားတူညီမှုကိုအကြံပြုသည့်နောက်ထပ်လက်တွေ့ဆောင်ရွက်မှုတွင် nutraceutical ပါဝင်သည် N-acetylcysleine (NAC)၊ အူမိုင်နိုအက်ဆစ်သည်အလွန်အကျွံသောက်သုံးနိုင်သောဖြည့်စွက်ဆေးဖြစ်သည်။ NAC သည် glutamatergic system များ၊ အထူးသဖြင့် mGluR2 နှင့် mGluR3 receptors များအပေါ်တွင်လွှမ်းမိုးမှုများမှတဆင့်စွဲလမ်းမှုကိုကုသရန်အဆိုပြုထားသောယန္တရားရှိသည်ဟုသတင်းများရရှိခဲ့သည်။30-33 ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလေ့လာမှုတစ်ခုအရရလဒ်များအရအိပ်မပျော်ခြင်းကိုနှစ်ဆမျက်စိကန်းခြင်းအားရပ်ဆိုင်းခြင်းသည်တက်ကြွသော NAC သည်ပြproblemနာ - လောင်းကစားခြင်းပြင်းထန်မှုကိုထိန်းသိမ်းရာတွင်ရလဒ်များအရအိပ်ယာထက်သာလွန်သည်။34 cooccurring ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်နီကိုတင်းမှီခိုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီ၏နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုပြproblemနာလောင်းကစားခြင်းနှင့်ဆေးလိပ်သောက်လျှော့ချအတွက်ထိရောက်မှုနှင့်သည်းခံစိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေး။29 ဒီလေ့လာမှုမှာအားလုံးသင်တန်းသားများကိုသိမြင်မှုအပြုအမူကုထုံး၏ရှုထောင့်နှင့်ပတ်သက်။ အမူအကျင့်ကုထုံး, စိတ်ကူးယဉ် desensitization နှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်ဆေးလိပ်သောက်ရပ်တန့်များအတွက်အမူအကျင့်ကုထုံးပစ်မှတ်ထားစိတ်ခွန်အားနိုးအင်တာဗျူးလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင် NAC ကိုရလဒ်များအရအိပ်ယာဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသော၊ မျက်မမြင်ပုံစံဖြင့်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ တွေ့ရှိချက်များအရတက်ကြွသော NAC သည် ၁၂ ပတ်ကုသမှုကာလအတွင်းဆေးလိပ်သောက်ခြင်းပြင်းအားကိုလျှော့ချရာတွင်ရလဒ်များအရအိပ်ယာထက်သာလွန်ကြောင်းနှင့် ၂၄ ပတ်ကြာနောက်ဆက်တွဲစစ်ဆေးမှုတွင်ပြproblemနာ - လောင်းကစားခြင်းပြင်းထန်မှုကိုလျှော့ချရာတွင်ရလဒ်များအရအိပ်ယာထက်သာလွန်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။29 ဤတွေ့ရှိချက်သည်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုကိုကုသရာတွင်အပြုအမူဆိုင်ရာကုထုံးများ၊ အထူးသဖြင့်သိမြင်မှုအပြုအမူဆိုင်ရာကုထုံးများအတွက်သတင်းပေးပို့ထားသည့် "အိပ်ပျော်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု" ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ရောဂါရှာဖွေခြင်းအတွက်ကုသမှုရလဒ်ကို NAC ကကူညီနိုင်မလားမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်သည်။35 ဆိုလိုသည်မှာသိမြင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုင်ရာကုထုံးသည်အထူးသဖြင့်တာရှည်ခံပုံရသည်၊ လူများသည် abstinent ဆက်လက်ထားရှိရန်နည်းလမ်းများကိုဆက်လက်လေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အခြားအပြန်အလှန်အားဖြင့်သီးခြားမဟုတ်သောအခြားဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုမှာ NAC သည် opioid-receptor ရန်လိုကဲ့သို့စွဲလမ်းစေသည့်ရောဂါများကိုစွဲစွဲလမ်းမှုကိုလျှော့ချရန်ကူညီခြင်း၊ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းနှင့်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါများကိုလေ့လာခြင်းနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဥပမာအားဖြင့် NAC သည်လောင်းကစားနှင့်ဆက်စပ်သောအတွေးများကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းတွင်တိုက်တွန်းခြင်းများဖြင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာထက်သာလွန်သည်။29 သေးငယ်တဲ့ယခင်လေ့လာမှုမှာလမ်းကြောင်းသစ်တွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီ34 နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်များအတွက်အစီရင်ခံတွေ့ရှိချက်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကိုကင်းမှီခိုမှုအတွက် NAC လေ့လာမှုများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရာတွင် NAC သည်စွဲအားနည်းခြင်းနှင့်ကိုကင်းသုံးစွဲလိုသည့်ဆန္ဒနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။33 ဆေးလိပ်သောက်သူများတွင်ဆေးရွက်ကြီးနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ရပ်များအပေါ် NAC ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်အာရုံကြောယန္တရားများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်အနေဖြင့် NAC ကိုရက်ပေါင်းများစွာကုသမှုခံယူခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တုန်ခါမှု၊ အပြုသဘောဆောင်သောသက်ရောက်မှုများနှင့် ventral striatum အပါအ ၀ င်ဒေသများတွင်ပိုမိုအားကောင်းသည့်အနားယူခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်သောဆက်သွယ်မှုများနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ medial prefrontal cortex, precuneus နှင့် cerebellum ။36 လောင်းကစားရောဂါအပါအ ၀ င်စွဲလမ်းမှုရှိသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်အသီးသီးအပေါ် NAC ၏ရေရှည်သက်ရောက်မှုများကိုလေ့လာရန်နောက်ထပ်လေ့လာမှုများလိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်လောင်းကစားမသန်စွမ်းသူများအတွက်ကုထုံးရွေးချယ်မှုကိုလမ်းညွှန်ရန်ပူးတွဲဖြစ်ပေါ်သောပစ္စည်း - သုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများကိုမည်သည့်အတိုင်းအတာအထိအသုံးပြုနိုင်မည်ကိုထပ်မံစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။37
PG / GD နှင့် SUDs ကိုချိတ်ဆက်နိုင်သောအချက်များတွင်မျိုးရိုးဗီဇနှင့် / သို့မဟုတ်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များပါဝင်သည်။ လေ့လာချက်နှစ်ခုအရ PG / GD နှင့် SUD များပူးတွဲပါ ၀ င်မှုကိုအထောက်အကူပြုသည် (Box ကို 3) ။ 38-51 SUDs များကဲ့သို့ပင်တိကျသော neurotransmitter မ်ားကို PG ကိုအထောက်အကူပြုရန်အဆိုပြုထားသည်။ serotonin သည် impulse control နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ယူဆသည်။ -related အပြုအမူတွေကိုဆုချဖို့ dopamine, နှိုးဆွခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုမှ norepinephrine; နှင့် opioids, တွန်းအားနှင့်တိုက်တွန်းရန်။52 အချို့သောအချက်အလက်များသည်ဤဆက်နွယ်မှုအချို့ကိုအထောက်အကူပြုသော်လည်း neurotransmitter ပံ့ပိုးမှုများသည်ပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီး SUDs များနှင့်ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် GD နှင့် HC အုပ်စုများတွင်ကွဲပြားမှုမရှိခြင်းအပါအဝင်သက်သေအထောက်အထားမျိုးစုံပေးထားသည်။11: D ၏ကို C] -raclopride အစီအမံ2receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်တူသည် DD ၏ pathophysiology တွင် dopamine ၏အဓိကအခန်းကဏ္questionကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။53 အလားတူပင် [၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုနှင့်ပတ်သက်။ မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်11လှုံ့ဆော် - အသုံးပြုခြင်းမမှန်လေ့လာမှုများမှဆင်းသက်လာအရှိဆုံးတသမတ်တည်းသိသာထင်ရှားသောတွေ့ရှိချက်နှင့်အတူ SUDs ကိုဖြတ်ပြီးကို C] -raclopride တွေ့ရှိချက်များ။54 D ကိုအသုံးပြုပြီးလေ့လာမှုများမှတွေ့ရှိချက်များ3- radioligand ကိုရည်ညွှန်းသည်။11ကို C] -propyl-hexahydronaphtho-oxazin ([11ကို C] -PHNO) ကိုလည်းလှုံ့ဆော် - အသုံးပြုမှုရောဂါနှင့် PG / GD နှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအကြားကွဲပြားခြားနားမှုကိုညွှန်ပြ။ အထူးသဖြင့်လေ့လာမှုအတော်များများသည်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေသောရောဂါများ (အထူးသဖြင့်စီဒီ) နှင့်မသက်ဆိုင်သူများနှင့်အုပ်စုလိုက်ကွဲပြားမှုများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည်။11C] - သိပ္ပံ nigra တွင် PHNO ရရှိနိုင်မှု၊55-58 ဤအသက်ရောက်မှုနှင့် PG / GD နှင့်မပါဘဲတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိမခံခဲ့ရသော်လည်း။59 အတူတူပင်ဤတွေ့ရှိချက်များကစွဲလမ်းနေသည့် dopamine နှင့်ဆက်စပ်သောတွေ့ရှိချက်အချို့သည်တိကျသောပစ္စည်းများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ကိုကင်းကဲ့သို့သောစိတ်ကြွဆေးများသည် dopamine စနစ်များကိုတိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ ထို့အပြင် differential ကို၏တွေ့ရှိချက်များ [11C] -raclopride သည်အထူးသဖြင့် ventral striatum (VS) တွင်ပါ ၀ င်ခြင်းနှင့် PG မပါ ၀ င်သည့်ပါကင်ဆန်ရောဂါ (PD) ရှိသူများတွင်ဖော်ပြသည်။60 PG မပါရှိသူများနှင့် PD မပါရှိသူများအနေဖြင့်ထိုသို့သောတွေ့ရှိချက်များကိုလေ့လာခြင်းမရှိသောကြောင့် PD နှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များ (ဥပမာ - dopamine နှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါဗေဒ) သည် PD တွင်ရှိသော PG ၏အာရုံကြောယန္တရားများအပေါ်မည်သို့သက်ရောက်နိုင်ကြောင်းနှင့် PD တွင်တွေ့ရှိရသည့်အချက်များကိုယေဘူယျအားဖြင့်သတိပေးသည်။ Non-PD လူ ဦး ရေရန်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်သည်အခြား neurotransmitter စနစ်များကို opioidergic နှင့်γ-aminobutyric အက်ဆစ် (GABA) -ergic အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုမှလေးစားမှုနှင့်အတူ GD နှင့်မပါဘဲတစ် ဦး ချင်းစီအကြားကွဲပြားခြားနားမှုကိုလေ့လာနှင့်အတူ, PG / GD အတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုခိုင်လုံကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။61,62
ထောင့်ကွက်3။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း / လောင်းကစားရောဂါနှင့်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်မျိုးရိုးဗီဇနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပံ့ပိုးမှုများ:
အထီးအမြွှာများ၏နမူနာတစ်ခုတွင်မျိုးရိုးဗီဇနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များသည်အရက်သုံးစွဲခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းရောဂါများနှင့်အတူရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်း၊ လောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာရောဂါများကိုအတူတကွဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ လှုံ့ဆော် - အသုံးပြုခြင်းမမှန်နှင့်အတူလောင်းကစားရောဂါသဘာဝအများစုမျိုးရိုးဗီဇဖြစ်ခဲ့သည်။38,39 ဤတွေ့ရှိချက်များအရလူမှုရေးအရလက်ခံသောအရာများသည်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာဆက်နွယ်သောနည်းအားဖြင့်လောင်းကစားခြင်း၊ ထိုကဲ့သို့သောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးမှုများသည်အမျိုးသမီးများအတွက်အထူးအရေးကြီးသည်။ ယောက်ျားများတွင်လောင်းကစားခြင်းနှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းရောဂါများပါ ၀ င်သည့်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများကိုသတိပြုမိသည်။40 လောင်းကစားခြင်းနှင့်ဆိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များမှာစိတ်ဒဏ်ရာနှင့်လူမှုရေးအားနည်းချက်များပါဝင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, စိတ်ဒဏ်ရာရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်,41 အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများအတွက်။42 အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ် ဦး စလုံးအကြားဂိမ်းစက်များအကြိမ်ရေပိုမိုများပြားလာခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်လောင်းကစားခြင်းရောဂါလက္ခဏာများမကြာခဏဖြစ်ပွားခြင်းကိုညွှန်ပြသည့်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများသည်ရပ်ကွက်အတွင်းရှိလူမှုရေးအားနည်းချက်အတိုင်းအတာနှင့် ပတ်သက်၍ ဖော်ပြခဲ့သည်။43 တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရလျှင်တွေ့ရှိချက်များအရလောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာရောဂါအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအန္တရာယ်များသည်လူမှုရေးအားနည်းချက်များနှင့်ထိတွေ့သူများအတွက်အမူအကျင့်အား ပိုမို၍ ဖော်ပြသည်ဟုဆိုသည်။ အထူးသဖြင့်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုကိုလောင်းကစားခြင်းရောဂါအတွက်မကြာသေးမီကမှသာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကန ဦး တွေ့ရှိချက်များအရ methylalion ၏ DRD2 (dopamine D ကိုများအတွက်ဗီဇ coding2 receptor သည်ရောဂါစွဲသောလောင်းကစားခြင်းအပါအ ၀ င်စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများနှင့်မမှန်မှုများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိရန်အဆိုပြုထားသည်။44 ထိုသို့နှင့်အတူချိတ်ဆက် disequilibrium ၌ရှိသကဲ့သို့ထိုကဲ့သို့သောသက်ရောက်မှုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြသည်ပေမယ့် ANKK1၊ အရက်နှင့်ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာဆက်နွယ်နေပုံရသည်၊45,46 ဖြစ်ကောင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတွက်β2-nikotinic acetylcholine receptors အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှတဆင့်47) နိမ့် methylalion ကုသမှုအတွက် abstinent တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်နှင့်ထကြွလွယ်သောတစ် ဦး ချင်းစီအားဖြင့်အဓိကအားမောင်းနှင်တွေ့ရှိချက်နှင့်အတူလေ့လာတွေ့ရှိနှင့်အတူ, ကုသမှု status ကိုနှင့် transdiagnostic features တွေပေါ်မူတည်လိမ့်မည်။48,49 လောင်းကစားရောဂါနှင့်ဆက်စပ်သောတိကျသောမျိုးဗီဇများကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်အားနည်းချက်များနှင့်ဒဏ်ခံနိုင်မှုနှစ်ခုလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များနှင့်လမ်းကြောင်းများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာထိတွေ့မှုများကြောင့်သူတို့၏ဖော်ပြမှုကိုမည်သို့လွှမ်းမိုးနိုင်ကြောင်းနောက်ထပ်သုတေသနပြုရန်လိုအပ်သည်။ ယနေ့အထိ, genome -wide အသင်းအဖွဲ့လေ့လာမှုများနှစ်ခုလောင်းကစားရောဂါအတွက်မျိုးရိုးဗီဇ - ကျယ်ပြန့်အရေးပါမှုကိုရောက်ရှိတိကျတဲ့ Genomics ဒေသများဖော်ထုတ်ကြပြီမဟုတ်50,51 သို့သော်လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်အရက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်လောင်းကစားဆိုင်ရာရောဂါများအတွက် polygenic အန္တရာယ်ရမှတ်များဆက်စပ်မှုရှိသည်။51 အဆိုပါရောဂါမှမျှဝေပံ့ပိုးမှုများကိုအကြံပြုယခင်တွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီ။38
လက်တွေ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) တွေ့ရှိချက်များက PG / GD နှင့် SUDs များနှင့်တူညီသောအချက်များ၊ ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲ၊ သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှုနှင့်တဏှာအပါအဝင်တိကျသောသိမြင်မှုဆိုင်ရာဒိုမိန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုအကြံပြုသည်။11,63,64 ဆုချီးမြှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့မှလေးစားမှုနှင့်အတူ, ဆုချီးမြှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ antatory အဆင့်စဉ်အတွင်း VS ၏တန်တန် activation အများအပြားအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိထားသည်65,66 ဒါပေမယ့်အားလုံးမဟုတ်,67 PG ၏လေ့လာမှုများ၊ ယခင်ရလဒ်များသည်အရက်နှင့်ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအခြား SUDs မှတွေ့ရှိချက်များနှင့်ဆင်တူသည်။68 Impulsivity သည် PG / GD နှင့်အရက်သုံးစွဲမှုရောဂါများကိုဆုချသောပရိုဂရမ်တွင်ချိတ်ဆက်ထားသည့်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်နိုင်သည်။66,69 ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ရလဒ်အဆင့်စဉ်အတွင်း ventromedial prefrontal cortex (vmPFC) ၏အတော်လေးလျော့နည်းလာ activation PG ဘာသာရပ်များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်66 သိပ္ပံနည်းကျထိန်းချုပ်မှုအပါအဝင်အခြားအခင်းအကျင်းအတွက် PG ဘာသာရပ်များအတွက်ဤဒေသ၏အတော်လေးလျှော့ချ activation ၏တွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီ,70 တဏှာ71 အန္တရာယ်များတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊72 နှင့်လောင်းကစား simulated ။73 လောင်းကစားခြင်းအားဖြင့်စိတ်ရောဂါသည် VS နှင့် VS အကြားအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်ဆက်သွယ်မှုနှင့်အပြုသဘောဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟုလောင်းကစားရန်တပ်မက်ခြင်း medial prefrontal cortex (mPFC) ။74 ဤတွေ့ရှိချက်များက PG ဘာသာရပ်များတွင်လောင်းကစားခြင်းမှဖြစ်ပေါ်လာသည့် dorsal mPFC တိုးပွားလာမှုနှင့် PG နှင့်အတူအမျိုးသမီးများအကြားလှုံ့ဆော်မှုကိုလေ့လာသည့်မကြာသေးမီကစွဲမက်နေသောလေ့လာမှုနှင့် ပက်သက်၍ တုံ့ပြန်မှု။75 PG / GD အတွက်မျိုးရိုးဗီဇကွဲပြားခြားနားမှုသည် ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့်အပြုအမူနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်သည်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုစတင်ခဲ့သည်။76-78
ထောင့်ကွက်4။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား / လောင်းကစားရောဂါအတွက်အာရုံကြောလုပ်ငန်းဆောင်တာအပေါ်မျိုးဗီဇလွှမ်းမိုးမှုသို့ကန ဦး စုံစမ်းစစ်ဆေး:
လူသိများအလုပ်လုပ်တဲ့သက်ရောက်မှုနှင့်အတူလေ့ဖြစ်ပေါ် allelic မျိုးကွဲပစ်မှတ်ထားကိုယ်စားလှယ်လောင်းဗီဇကိုအသုံးပြုပြီးအများအပြားလေ့လာမှုများကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းနှင့်ကျန်းမာသောနှိုင်းယှဉ်ခြင်း (IIC) ဘာသာရပ်များရှိသည့်ဘာသာရပ်များအား fMRI လေ့လာမှုကိုအလုပ်လုပ်သော allelic polymorphism (rsl61115) မှပြင်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်မည်မျှစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးမှုအပြောင်းအလဲကိုစုံစမ်းရန်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ DBH၊ dopamine / norepinephrine ပြောင်းလဲခြင်းတွင် DBH ၏အင်ဇိုင်းပြုမှုလှုပ်ရှားမှု၏ ၃၅% မှ ၅၂% အထိရှိသည့်အင်ဇိုင်း dopamine-β hydroxylase (DBH) ကို encoding the gene ။76 ကြိုတင်လေ့လာမှုများမှာတော့ T allele corticostriatolimbic ဦး နှောက်ဒေသများနှင့်ရောဂါရှာဖွေအုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးအကျိုးသက်ရောက်အပြောင်းအလဲနဲ့အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှ ဦး ဆောင်လျော့နည်းအင်ဇိုင်းပြုလှုပ်ရှားမှု, လျော့နည်းစာနာမှု, အနိမ့်အသိစိတ်, ပိုပြီးအသစ်အဆန်းရှာဖွေခြင်းနှင့်သာ။ ကြီးမြတ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုပြင်းထန်မှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။76 အမူအကျင့်နှင့် ဦး နှောက်တုံ့ပြန်မှုများကို T-carrier များကအထူးသဖြင့်ဝမ်းနည်းဖွယ်လက္ခဏာများပြနေစဉ်အတွင်းဝမ်းနည်းဖွယ်လက္ခဏာများနှင့် corticostriatolimbic ဦး နှောက်ဒေသများ၏သက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုနည်းပါးခြင်းကြောင့် ၀ မ်းနည်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောနိမ့်ကျသောသတင်းပို့မှုများကိုပြသခဲ့သည်။76 သီးခြားလေ့လာမှုတစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်သော allele (Val-158-Met၊ ၄၀% လျော့နည်းသောလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ဆက်စပ်သည့် Met allele နှင့်အတူ) ၏ COMT၊ အင်ဇိုင်း catechol- encoding ကဗီဇO-methyltransferase (COMT), ရောဂါဗေဒလောင်းကစားများအတွက်ကုသမှုခံယူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်77 အဆိုပါ Met allele COMT inhibitor tolcapone နှင့်အတူဆင်းရဲတဲ့ကုသမှုရလဒ်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။77 ထိုအဖြစ် COMT Met / Met genotype သည်ပြproblemနာ - လောင်းကစားခြင်းနှင့်အရက်သေစာသောက်စားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား / လောင်းကစားနှင့်အရက်သောက်သုံးခြင်းရောဂါများကိုကုသရန်အရေးကြီးသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိနိုင်သည်။78
PG / GD နှင့် SUD အုပ်စုများတွင် ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံတွင်တူညီခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုတိုက်ရိုက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, cue- သွေးဆောင်တဏှာလေ့လာမှုယခင်စွဲစွဲဘာသာရပ်များအတွက်တိုးမြှင့ activating သရုပ်ပြနှင့်အတူ ventral နှင့် dorsal mPFC ဆိုလိုတာကအခြေအနေ (လောင်းကစား, ကိုကာကိုလာနှင့်ဝမ်းနည်းတွေကို) အခြေအနေအားဖြင့်အုပ်စုတစ်စု (PG, CD နှင့် HC) ဖော်ထုတ်ခဲ့သည် ကိုကင်းတွေကိုတုန့်ပြန်သောအားဖြင့်တုံ့ပြန်မှုအရ (လောင်းကစားတွေကိုတုံ့ပြန်သည့် PG၊ စီဒီ၊ ကိုကင်းမှ၊ နှင့် HC၊ ဝမ်းနည်းဖွယ်လောင်းကစားများသို့) လှုပ်ရှားမှုတိုးလာသည်။75 simulated slot-machine fMRI လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအနိုင်ရရှိမှု၊ ဆုံးရှုံးမှုနှင့်အခြားအဖြစ်အပျက်များကိုလေ့လာခြင်းတွင် PG သည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောဖြစ်ရပ်များ (ဥပမာ - ပထမ slot-maching reels နှစ်ခုနှင့်လိုက်ဖက်သည့်အချိန်) တွင် HC ဘာသာရပ်များထက် VS ကိုပိုမိုအားကောင်းစေကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သေချာသည့်ဆုံးရှုံးမှုများ (ဥပမာ - ပထမနှင်တံနှစ်ခုမကိုက်ညီသောအချိန်တွင်) တွင် HC ဘာသာရပ်များထက် VS ကိုလျော့နည်းစေသည်။79 “ အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ခြင်း” (reels သုံးခုစလုံးနှစ်ခုနှင့်လိုက်ဖက်သည့်အခါ) ကိုအပြည့်အဝဆုံးရှုံးမှု (ဆိုလိုသည်မှာ reels လိုက်ဖက်ခြင်းမရှိသောအချိန်) နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် vmPFC တွင်အလားတူပုံစံပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။79 ဤတွေ့ရှိချက်များအရလောင်းကစားခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲသည် PG ဘာသာရပ်များရှိနိုင်သည့်နိုင်မှုများနှင့်စီဒီဘာသာရပ်များတွင်ဖြစ်နိုင်သောဆုံးရှုံးမှုများကို ပိုမို၍ အာရုံစူးစိုက်နိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ အရှုံးနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောလုပ်ငန်းစဉ် (အရှုံးဖြင့်စတင်ခြင်းနှင့်ဆက်တိုက်“ နှစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်အချည်းနှီးသောလောင်းကစားခြင်းသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုကိုလက်ခံခြင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာများရှိခြင်း”) တွင်စီဒီနှင့် PG ဘာသာရပ်များသည်ခြားနားဥာဏ်ရည်ရှိကလေးငယ်များနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်ကာလများတွင်ကွဲပြားမှုများပြသခဲ့သည်။80 အထူးသဖြင့် PG ဘာသာရပ်များသည်လိုက်ဖမ်းခြင်းမလုပ်မီဆုံးဖြတ်ချက်များမချမီ HC နှင့် CD ဘာသာရပ်များထက် mPFC circuit ထက်ပိုမိုထိတွေ့မှုကိုပြသခဲ့သည်။ CD ဘာသာရပ်များသည် amygdalar-striatal circuit ရှိ HC ဘာသာရပ်များထက်ထိတွေ့မှုနည်းသည်။80 ဤတွေ့ရှိချက်များက PG နှင့် CD အနှံ့လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဆု / ဆုံးရှုံးမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အရေးကြီးသောတူညီမှုများနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်
တစ် ဦး ပျံ့နှံ့ tensor ပုံရိပ်လေ့လာမှု corlicostriatal နှင့် parieto-occipital ဝေစာများအတွက်အလယ်တန်း (ကူး) အမျှင်အတွက် PG နှင့် CD ဘာသာရပ်များ (HC ဘာသာရပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက) အလားတူကွဲပြားခြားနားမှုလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်, အုပ်စုများအတွက်စွဲအုပ်စုများအတွက်ဆင်းရဲတဲ့အဖြူ - သမာဓိရှိအလားတူပုံစံများကိုအကြံပြု ယခင်ကဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့စွဲလမ်းပါဝင်ပတ်သက် ဦး နှောက်ဒေသများချိတ်ဆက်အတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ။28 PG, CD နှင့် IIC ဘာသာရပ်များရှိမီးခိုးရောင်ပမာဏပမာဏကိုစစ်ဆေးခြင်းသည် PG နှင့် HC အုပ်စုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက CD အုပ်စုသည်တို့တို့တို့တို့တို့ရှေ့ပိုင်း cortical ပမာဏကိုပြသသည် ဒေသများ (amygdala, hippocampus) ။81 ဤတွေ့ရှိချက်များအရအချို့သော neurobiological တွေ့ရှိချက်များအရရောဂါရှာဖွေအုပ်စုများနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာဆက်နွယ်နေသည် (ဤကိစ္စတွင်ကိုကင်း၏ neurotoxic သက်ရောက်မှုများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည်),82 ဤဖြစ်နိုင်ခြေသည်မှန်းဆမှုများနှင့် longitudinal လေ့လာမှုများတွင်တိုက်ရိုက်စစ်ဆေးခြင်းကိုခိုင်လုံစေသော်လည်းအခြားသူများသည် transdiagnostic အစီအမံများနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာချိတ်ဆက်သော်လည်းအဆုံးစွန်သည် RDoC (Research Domain Criteria) နှင့်ကိုက်ညီသည်။83,84
SUD များအတွက်မော်ဒယ်များစွာကိုသမိုင်းကြောင်းအရ PG / GD တွင်အသုံးပြုခဲ့သော်လည်းဤဖြစ်စဉ်တွင်သတိထားသင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်နှင့်အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း DG ဆေးစွဲမှုနှင့် Dopamine ၏အဓိကကျသောအချက်ကိုကျယ်ပြန့်စွာကျယ်ပြန့်စွာနားလည်သဘောပေါက်မှုသည် PG / GD နှင့် SUDs အမျိုးမျိုးအတွက်မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။53,54 နှင့် SUDs ၏မျိုးရိုးဗီဇလေ့လာမှုများမကြာခဏပစ္စည်းဥစ္စာဇီဝြဖစ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဗီဇဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, PG / GD များအတွက်ကျယ်ပြဇီဝဗေဒနှင့် / သို့မဟုတ်အာရုံကြောမော်ဒယ်နှင့် SUDs များအတွက်သူတို့ထံမှကွဲပြားခြားနားမှုလက်ရှိအချိန်မတိုင်မီသို့မဟုတ်မှန်းဆဖြစ်နိုင်သည်။ သူကဆိုသည်, PG / GD နှင့် SUDs ကိုတိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ဒေတာပိုကြီးတဲ့နမူနာအရွယ်အစား employ ပုံရိပ်လေ့လာမှုများကောက်ယူနေကြသည်နှင့်ပိုမိုတည်ငြိမ်ခြင်းနှင့်ပုံတူရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်ကြောင်းသရုပ်ခွဲချဉ်းကပ်မှုအသုံးပြုကြသည်အထူးသဖြင့်အဖြစ်, အရေးကြီးသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးပါလိမ့်မယ်။ PG / GD နှင့် SUD အကြားအာရုံကြောနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာတူညီချက်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုထိုကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းစဉ်ကပိုမိုတိကျစွာဖော်ပြသင့်သည်။
အင်တာနက်သည်ရရှိနိုင်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုများပြားလာသည်နှင့်အမျှအင်တာနက်ပေါ်ရှိအပြုအမူအချို့သည်ပြproblemနာဖြစ်စေနိုင်သည်သို့မဟုတ်စွဲလမ်းစေနိုင်သည့်အတိုင်းအတာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားထားသည်။ ကန ဦး လေ့လာမှုများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အင်တာနက်အမျိုးအစားများနှင့်ပုံစံများကိုအဓိကထားအာရုံစိုက်သည် (ဆိုလိုသည်မှာ“ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု”)85) အင်တာနက်ပေါ်တွင်ပြုလုပ်သောအပြုအမူအမျိုးအစားများကိုမကြာသေးမီကပိုမိုအာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ အထူးသတိပြုရမည့်အချက်မှာဂိမ်းဖြစ်သည်။ The DSM-5 SUD အလုပ်အဖွဲ့သည်အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကိုစဉ်းစားပြီးအင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းရောဂါ (IGD) အတွက်ယာယီသတ်မှတ်ချက်များကိုအခန်း ၃ တွင်ထည့်သွင်းရန်အဆိုပြုထားသည်။ DSM-5, အပိုဆောင်းသုတေသနခိုင်လုံသောအခြေအနေများဖြေရှင်းရန်ရည်ရွယ်ထားတဲ့အပိုင်း။86 ဂိမ်းကစားခြင်းကိုအာရုံစိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်လက်ရှိအချိန်တွင်အခြားအင်တာနက်အသုံးပြုမှုပုံစံများထက်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောပြproblemsနာများအတွက်အချက်အလက်များပိုမိုရရှိနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လက်ရှိတွင်အင်တာနက်နှင့်သက်ဆိုင်သောအပြုအမူများ (ဥပမာ - လူမှုကွန်ယက်၊ လောင်းကစား၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်း) ရှိသည်။ , စျေးဝယ်) လက်ရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။87 IGD အတွက်စံသတ်မှတ်ချက်များသည် GD နှင့်တူညီသည်။ အဓိကလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များတွင်သည်းခံခြင်း၊ ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ အလုပ်များခြင်းနှင့် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းစသည့်အချက် ၁၀ ချက်ပါ ၀ င်သောအချက် (၁၀) ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့်ဆေးခန်းတွင်သိသိသာသာချို့ယွင်းခြင်းသို့မဟုတ်ဒုက္ခရောက်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။7 အဆိုပြုထားသည့်ရောဂါရှာဖွေရေးအဖွဲ့သည် IGD ကိုအကဲဖြတ်ရန်ပိုမိုကိုက်ညီမှုရှိစေသော်လည်းငြင်းခုံမှုများရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ပညာရှင်အချို့က IGD ကိုရောဂါရှာဖွေရေးအဖွဲ့ဟုအသိအမှတ်ပြုခြင်းသည်ဂိမ်းတွင်ပါ ၀ င်သူများအတွက်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။88 အချို့ကမူပုံမှန်ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ရှိခြင်းသည်မူဝါဒများ၊ ကာကွယ်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကြိုးပမ်းမှုများကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။89 အဆိုပါ 11th ထုတ်ဝေဘို့စဉ်းစားခံရဂိမ်းရောဂါအတွက်အဆိုပြုထားစံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရောဂါများအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း (ICD-11) အွန်လိုင်းရရှိနိုင်ပါသည် (ဤစာရေးသားချိန်၌၊ ။ အဓိကအင်္ဂါရပ်များမှာဂိမ်းနှင့်ပတ်သက်သောအဓိကလုပ်ဆောင်မှုများ (ဥပမာ၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်း) တွင် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း၊ ဆိုးဝါးသောအကျိုးဆက်များနှင့်ကစားခြင်းအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုချို့ယွင်းခြင်းများရှိနေသော်လည်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည့်အနည်းဆုံး ၁၂ လကာလအတွင်းမြဲမြံပြီးထပ်တလဲလဲကစားသည့်ကစားနည်းများဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်အွန်လိုင်းနှင့်အများအားဖြင့်အော့ဖ်လိုင်းအများစုတွင်ပါ ၀ င်သူများအားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြforနာများအတွက်အန္တရာယ်ရှိစေနိုင်သောဂိမ်းအမျိုးအစားများနှင့်ပုံစံများတွင်ပါ ၀ င်သူများကိုဖမ်းဆီးရန်ရည်ရွယ်သည့်အန္တရာယ်ရှိသောဂိမ်းအမျိုးအစားများကိုအဆိုပြုထားသည်။ ဂိမ်းချို့တဲ့မှုအဆင့်ကိုရောက်ရန်မရှိသေးပါ ဤအင်္ဂါရပ်များ၊ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အပြန်အလှန်သီးသန့်သီးခြားအပြုအမူများသည်လည်းလက်ရှိ GD အတွက်သတ်မှတ်ထားသောစံများအတွက် beta-draft format ၌တည်ရှိသည်။ ICD-11, အဆိုပြုထားသည့်အုပ်စုတွင် SUD နှင့်အတူနှစ် ဦး စလုံးရောဂါများ၏ခွဲခြားနှင့်အတူ "ပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကြောင့်။ "
ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများရှိနေသော်လည်း88,89 IGD နှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာမှုများပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။ IGD၊ GD နှင့် SUDs တို့အကြားတူညီမှုနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုနှစ်ခုလုံးနှင့်အတူထိရောက်သောကုသမှုနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာဇီဝဗေဒအထောက်အပံ့များကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။90 မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူလေ့လာမှုများသည်ငယ်ရွယ်သောနမူနာအရွယ်အစားနှင့်အခြားကန့်သတ်ချက်များနှင့်အတူအစောပိုင်းအဆင့်တွင်ရှိနေသေးသည်။91 ကုသမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ အနည်းငယ်သာတရားဝင်စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသိပ္ပံနည်းကျအမူအကျင့်ဆိုင်ရာကုထုံးများကို IGD နှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုများအားပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာဖြင့်အစောပိုင်းလေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။92,93 IGD အတွက်ထိရောက်သောကုသမှုများကိုအခြေခံသည့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအာရုံကြောဆိုင်ရာယန္တရားများကိုကန ဦး လေ့လာမှုများစတင်ခဲ့သည် ဥပမာအားဖြင့်၊ သိလိုစိတ်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာကုထုံးနှင့်သတိရှိမှုများကိုပါ ၀ င်သည့်တွန်းအားသောအပြုအမူဆိုင်ရာ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှု (test-retest condition) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုပြင်းထန်မှု၊ ကစားရသောအချိန်နှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းစသည်တို့ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ဆက်စပ်သောတဏှာ။93 စမ်းသပ်မှု - ပြန်လည်စစ်ဆေးမှုအဖွဲ့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက CBI ၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအုပ်စုသည်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအပြီးတွင်ဂိမ်းနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များမှအင်ဆူလာကိုတိုးမြှင့်ခြင်းကိုလည်းပြသခဲ့သည်။93 ထို့အပြင်အနားယူ - ပြည်နယ်တွေ့ရှိချက် CBI orbitofrontal cortex နှင့် hippocampus အကြားနှင့် posterior cingulate နှင့်မော်တာ -related ဦး နှောက်ဒေသများအကြားဆက်သွယ်မှုလျော့နည်းသွားကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။94 ဤတွေ့ရှိချက်များအရ CBI သည် cue ထိတွေ့မှုနှင့် SUDs နှင့် GD တို့တွင် cue-induced တဏှာစွဲမှုတွင်ပါ ၀ င်သည့်ဒေသများအကြားရှိဆက်သွယ်မှုစွမ်းအားကိုလျော့ချခြင်းဖြင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလုပ်မလုပ်နိုင်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ အခြားဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ (ဥပမာ - သိမှုထိန်းချုပ်ခြင်း၊ စွန့်စားမှုဆုချခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း) ကို IGD တွင်ကုသရန်အလားအလာရှိကြောင်းအဆိုပြုထားသည်။95 နှင့် fMRI စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများသည်ဤဖြစ်စဉ်များ၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုများနှင့် IGD မပါ ၀ င်သူများနှင့်ကွဲလွဲမှုများကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။96,97 ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, လက်တွေ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေမှာသူတို့ရဲ့အလားအလာပစ်မှတ်ထားတိုက်ရိုက်စာမေးပွဲအာမခံ။
ပြ-နာရှိသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပုံစံများသည်အင်တာနက်အခြေပြုနှင့်အင်တာနက်အခြေခံမဟုတ်သောပုံစံများသည်လက်တွေ့ကျစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုနှင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုလိုအပ်သည်။ Hypersexual ရောဂါပါဝင်မှုအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည် DSM-5 ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်းမပါဝင်ပါ။98 လတ်တလောတွင်“ compulsive sex behavior disorder” (CSB) ဟုခေါ်သည့်ရောဂါရှာဖွေသည့်အဖွဲ့အစည်း၏ beta မူကြမ်းမူကွဲရှိသည်။ ICD-11 (http://apps.who.int/classifications/icdll/browse/f/en#/http%3a%2f%2fid.who.int%2ficd%2fentity%2fl630268048) အဆိုပြုထားသောရောဂါ၏လက္ခဏာများတွင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသောအချိန်၊ လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများကိုထိန်းချုပ်ရန်မအောင်မြင်သောကြိုးပမ်းမှုများနှင့်ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များရှိသည့်တိုင်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုအနည်းဆုံး ၁၂ လပါ ၀ င်သော“ ပြင်းထန်သော၊ ထပ်ခါတလဲလဲလိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများသို့မဟုတ်တိုက်တွန်းမှုများကိုထိန်းချုပ်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းပုံစံ” တို့ပါဝင်သည်။ ဘဝ၏အဓိကကျသည့်နေရာများတွင်သိသိသာသာစိတ်သောကရောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ချို့ယွင်းမှုရှိခြင်းနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်း။ CSB နှင့် GD၊ ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့် SUDs တို့၏ဖော်ပြချက်များနှင့် CSB တွင်စွဲလမ်းမှု၏အဓိကပါဝင်မှုများရှိသော်လည်း CSB သည်“ Impulse Control Disorder” အဖြစ်ခွဲခြားရန်အဆိုပြုထားသည်။ ICD-11, pyromania, kleptomania နှင့်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပေါက်ကွဲရောဂါနှင့်အတူ။ ဤချဉ်းကပ်မှုသည် CSB နှင့်သက်ဆိုင်သောအသင့်တော်ဆုံးခွဲခြားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောဆက်လက်ဆွေးနွေးမှုများနှင့်ထိရောက်သောကုသမှုများနှင့်ပျံ့နှံ့မှုခန့်မှန်းချက်များအပါအ ၀ င်နယ်ပယ်များစွာရှိ CSB နှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်အကန့်အသတ်ရှိခြင်းကိုထင်ဟပ်စေနိုင်သည်။99,100
စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသုတေသနအာရုံစိုက်မှုရရှိခဲ့သည့်နယ်ပယ်တစ်ခုမှာ CSB ၏ neurobiology ဖြစ်သည်။101 ဥပမာ CSB နှင့်အတူမပါဘဲလိင်ကွဲလိင်တူဆက်ဆံသူများကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင် CSB ရှိသူများသည်လိင်မှုဆိုင်ရာဆန္ဒများနှင့်ဆက်နွှယ်သောဤဒေသများရှိလုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုများနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားမှုအရလိင်စိတ်နိုးထစေသည့်လိင်ဆက်ဆံမှု၊ Non-CSB ယောက်ျားနှိုင်းယှဉ် CSB ၌တည်၏။102 လိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများတွင်ပြproblemနာအပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ရှုခြင်း (FPU) နှင့်အတူဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ PPU ရှိသူများသည်ငွေကြေးအကျိုးအမြတ်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသူများထက်ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်များကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်အချက်များအား ပိုမို၍ VS လှုပ်ရှားမှုအားပြသခဲ့သည်။103 လေ့လာမှုနှစ်ခုလုံးတွင်စွဲလမ်းမှု၏မက်လုံး - အဓိကကျသည့်သီအိုရီများနှင့်ကိုက်ညီမှုကိုဖော်ပြထားသည်။ အခြားလေ့လာမှုများကမူ CSB တွင်စွဲလမ်းမှုတင်ပြမှုနှင့်ဆင်တူသောဘက်လိုက်မှုများကိုဖော်ပြသည်။104,105 ကြိုတင်လေ့လာထားသည့်အချက်အလက်များအရ naltrexone သည် PPU ကိုကုသရာတွင်တိုက်တွန်းမှု / စွဲလမ်းမှုကိုလျှော့ချရန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။106 ပpreliminaryိပက္ခနှင့်အဓိကအားဖြင့်လိင်ကွဲယောက်ျားများပါဝင်သော်လည်း, ဒေတာ CSB နှင့် GD နှင့် SUD ကဲ့သို့စွဲစွဲရောဂါများအကြားမျိုးစုံတူညီအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အပြုအမူစွဲလမ်းမှုနယ်ပယ်သည်ဆက်လက်တိုးတက်နေသော်လည်း၎င်းသည်ငယ်ရွယ်ဆဲဖြစ်ပြီး၊ လက်ရှိလူသိများလာသည်နှင့်လက်တွေ့အလေ့အကျင့်များတွင်ကွာဟချက်များစွာကျန်ရှိနေသည်။ လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များစွာက PG / GD ၏ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအခြေခံများကိုပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်လာခဲ့ကြသော်လည်းဤအချက်အလက်များကိုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကုသရေးမဟာဗျူဟာများသို့ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းသည်နှေးကွေးခဲ့ပြီး၊ ထိုအချိန်တွင်ယူအက်စ်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှုမှခွင့်ပြုချက်မရရှိသေးပါ။ အရေးအသား။ ထို့အပြင်အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများကိုအာရုံစိုက်သည့်သီးခြားဌာနများပါ ၀ င်သည့်အမေရိကန်အမျိုးသားကျန်းမာရေးဌာန၏လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်မည်သည့်တက္ကသိုလ်ကမျှသုတေသနပြုသည့် ဦး စားပေးအပြုအမူဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုမရှိပါ။107 ထို့ကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသောဇီဝဖြစ်စဉ်များကိုနားလည်ရန်တိုးတက်မှုသည်အခြားစိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါများထက်ပိုမိုနှေးကွေးနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်သုတေသနပြုလုပ်နေခြင်းနှင့်နည်းပညာတိုးတက်မှုများနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများ၏ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ ဇွဲရှိမှုနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့နှင့်ဆက်စပ်သောတစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာနားလည်မှုရှိစေရန်နှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းနှင့်ပိုမိုထိရောက်သောစောင့်ရှောက်မှုရရှိရန်မျှော်လင့်ချက်များဆက်လက်ရှိနေရန်အကြောင်းပြချက်ရှိသည်။ ထို့အပြင်အနာဂတ်၌အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများကိုတားဆီးကာကွယ်ခြင်း၊ ကုသခြင်းနှင့်မူဝါဒများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောချဉ်းကပ်မှုများရှိလာလိမ့်မည်။
ဒေါက်တာ Potenza ကအကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာပconflictsိပက္ခများမရှိပါ။ ဒေါက်တာ Potenza သည် INSYS၊ Shire၊ RiverMend ကျန်းမာရေး၊ Opiant / Lakelight ကုထုံးနှင့် Jazz ဆေးဝါးများအတွက်အကြံဥာဏ်ပေးသည်၊ Moohgan Sun Casino၊ National Responsible Gaming Center နှင့် Pfizer တို့မှသုတေသနအထောက်အပံ့များရရှိခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးစွဲမှု၊ လှုံ့ဆော်ထိန်းချုပ်မှုမမှန်ခြင်းများသို့မဟုတ်အခြားကျန်းမာရေးအကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်သောစစ်တမ်းများ၊ စာပို့ခြင်းသို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းဖြင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းများတွင်ပါ ၀ င်သည်။ လောင်းကစားခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းစေသည့်ရောဂါများနှင့်ပတ်သက်သည့်ကိစ္စရပ်များအတွက်လောင်းကစားခြင်းနှင့်တရား ၀ င်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်အကြံပေးခြင်း၊ စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်စွဲလမ်းမှုဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများပြConnectနာလောင်းကစား ၀ န်ဆောင်မှုအစီအစဉ်၏ Connecticut ဌာနတွင်လက်တွေ့ကုသမှုပေးသည်။ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဌာနနှင့်အခြားအေဂျင်စီများအတွက်ထောက်ပံ့ငွေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဂျာနယ်များ၊ ဂျာနယ်များ၊ CME ဖြစ်ရပ်များနှင့်အခြားလက်တွေ့သို့မဟုတ်သိပ္ပံဆိုင်ရာနေရာများတွင်ပညာသင်ကြားမှုများပေးခဲ့သည်။ စိတ်ကျန်းမာရေးစာစောင်များထုတ်ဝေသူများအတွက်စာအုပ်များသို့မဟုတ်စာအုပ်အခန်းများကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ Potenza ၏ပါ ၀ င်မှုသည်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားရှိသည့် Gaming Centre of Excellence ထောက်ပံ့ငွေနှင့် National စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆိုင်ရာစင်တာမှထောက်ပံ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ပါ ၀ င်သည့်အရာသည်ရန်ပုံငွေပေးသည့်အေဂျင်စီများ၏အမြင်များကိုသေချာပေါက်မဖော်ပြနိုင်ပါ။
Sud ပစ္စည်း - အသုံးပြုမှုရောဂါ
VS ventral striatum
1. ဒေါက်ဂလပ် Harper ကို, သမိုင်းပညာရှင်။ စွဲ၏အဓိပ္ပါယ်။ Dictionary.com ။ အွန်လိုင်းအင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်။ : http://www.dictionary.com/ browse / စွဲမှာရရှိနိုင်။ ဝင်ရောက်မတ်လ 26, 2017 ။
2. O'Brien က CP ။ , Volkow N. , Li TK ။ စကားလုံးထဲမှာဘာရှိလဲ DSM-V ကိုမှီခိုနှိုင်းယှဉ်စွဲ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006;163(5):764–765. [PubMed]
3 ။ Potenza MN ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲခြင်း၏ neurobiology: ခြုံငုံသုံးသပ်နှင့်အသစ်တွေ့ရှိချက်များ။ Phil Trans R ကို Soc ခ 2008;363(1507):3181–3189. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
4. Grant JE ။ , Potenza MN ။ , Weinstein အေ, Gorelick DA ။ အမူအကျင့်စွဲနိဒါန်း။ နံနက် J ကိုမူးယစ်ဆေးအရက်အလွဲသုံးမှု။ 2010;36(5):233–241. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
5. Holden C. အမူအကျင့် '' စွဲ: သူတို့တည်ရှိပါသလား သိပ္ပံ။ 2001;294(5544):980–982. [PubMed]
အဆိုပြုထားသော DSM-V တွင် ၆။ Holden C. အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှု သိပ္ပံ။ 2010; 327 (5968): 935 ။ [PubMed]
7 ။ American Psychiatric Association ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ၏ရောဂါနှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်။ ၅ ကြိမ်မြောက်။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း။ ၂၀၁၃
8 ။ Potenza MN ။ မမှန်သည် non-ပစ္စည်းဥစ္စာ-related အခြေအနေများပါဝင်သည် addictive သငျ့သလော စွဲလမ်း။ 2006;101(suppl 1):142–151. [PubMed]
9. Potenza MN, Koran LM ။ , Pallanti S. Impulse Control Disorders နှင့် obsessive-compulsive disorder: လက်ရှိနားလည်မှုနှင့်အနာဂတ်သုတေသနလမ်းညွှန်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2009;170(1):22–31. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
10. Petry မိုင်။ စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများအတိုင်းအတာကိုလောင်းကစားဝိုင်းတွင်ထည့်ရန်ကျယ်ပြန့်သင့်သလား။ စွဲလမ်း။ 2006;101(suppl 1):152–160. [PubMed]
11. Fauth-Buhler အမ်, မန်း K. , Potenza MN ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား: တစ် ဦး စွဲရောဂါအဖြစ်က၎င်း၏ခွဲခြားများအတွက် neurobiological သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုပြန်လည်သုံးသပ်။ စှဲလမျးသူ Biol ။ ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏ 2016 မတ်လ3Epub ။ Doi: 10.1111 adb.12378 ။
12. Potenza MN ။ , Steinberg MA ။ , McLaughlin SD ။ , Wu R. , Rounsaville BJ ။ , O'Malley အက်စ်အက်စ်။ လောင်းကစားဟယ်လင်းကို သုံး၍ ပြproblemနာရှိသည့်လောင်းကစားသမားများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများတွင်ကျား - မကွဲပြားမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001;158(9):1500–1505. [PubMed]
13. Tavares အိပ်ချ်, Zilberman ML ။ , Beites FJ ။ J ကို Gamble လုံး။ 2001;17(2):151–160. [PubMed]
14. Grant ကဂျေကင်မ် SW ။ ဆေးကုသမှုခံယူရန်ရှာဖွေနေရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားများအတွက်ကျားကွဲပြားမှု။ Compr စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002;43(1):56–62. [PubMed]
15. Grant JE ။ , Odlaug BL ။ , Mooney ME ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားအတွက်အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းဖြစ်ရပ်ဆန်း - လိင်၊ J ကိုအာရုံကြော Ment dis ။ 2012;200(11):996–998. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
16. Slutske WS ။ , Piasecki TM ။ , Deutsch AR ။ , Statham DJ ။ ။ , Martin NG ။ အလုအယက်လောင်းကစားခြင်း၏အချိန်ကာလတွင်အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းနှင့်ကျား၊ မကွဲပြားမှုများ - အထွေထွေလူ ဦး ရေစာရင်းမှသက်သေသာဓကများ။ စွဲလမ်း။ 2015;110(1):144–151. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
17. Randall C. ရောဘတ် JS ။ , Del Boca FK ။ , ကာရိုး KM ။ , ကော် GJ ။ , Mattson ME ။ သောက်သုံးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအထင်ကရဖြစ်ရပ်များ၏အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်း - ကျားမနှိုင်းယှဉ်မှု။ J ကိုလုံးအရက်။ 1999;60(2):252–260. [PubMed]
18. Slutske WS ။ , Zhu G. အ, Meier MH ။ , Martin NG ။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်မသန်မစွမ်းလောင်းကစားခြင်းအပေါ်မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးမှုများ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2010;67(6):624–630. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
19. Slutske WS ။ , Richmond-Rakerd LS ။ ဆယ်ကျော်သက်ကျန်းမာရေးအမျိုးသားလောင်ဂျီတွဒ်လေ့လာမှုတွင်လောင်းကစားခြင်းအပေါ်မျိုးရိုးဗီဇနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးမှုများ၌လိင်ကွဲပြားမှုများအတွက်သက်သေအထောက်အထားများကိုအနီးကပ်လေ့လာကြည့်ပါ။ စွဲလမ်း။ 2015;109(1):120–127. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
20. Richmond-Rakerd LS ။ , Slutske WS ။ , Heath AC ။ , Martin NG ။ အရက်သောက်ခြင်းနှင့်လောင်းကစားခြင်းစသည့်အချိန်ကာလအပေါ်မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးမှုများ - ကွဲပြားသော etiologies နှင့်လိင်ကွဲပြားမှုများအတွက်သက်သေအထောက်အထား။ စွဲလမ်း။ 2014;109(2):323–331. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
21. Yip SW ။ , Potenza MN ။ လောင်းကစားမမှန်ကုသမှု။ Curr ဆက်ဆံမှု Options ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2014;1(2):189–203. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
22. Grant JE ။ , ကင်မ် SW ။ , Hollander အီး, Potenza MN ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း၏ကုသမှုအတွက် opiate ရန်ဘက်ပြုသူနှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာတုံ့ပြန်မှုခန့်မှန်း။ Psychopharmacology (Berl) ။ 2008;200(4):521–527. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
23. Grant JE ။ , Potenza MN ။ , Kraus SW ။ , Petrakis IL ။ အရက်သေစာမှီခိုခြင်းနှင့်လောင်းကစားခြင်းပြproblemsနာများရှိသောစစ်ပြန်များအတွက် Naltrexone နှင့် disulfiram ကုသမှုတုံ့ပြန်မှု။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ စာနယ်ဇင်း၌တည်၏။
24. Maisel မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား။ , Blodgett JC ။ , Wilbourne PL ။ , Humphrey K. , Finney JW ။ အရက်အသုံးပြုမှုရောဂါများကိုကုသရာတွင် naltrexone နှင့် acamprosate တို့ကို meta-analysis လုပ်သည်။ စွဲလမ်း။ 2013;108(2):275–293. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
25. Oslin DW ။ , Berrettini ဒဗလျူ၊ Kranzler HR ။ , et al သည် -opioid receptor gene ၏အလုပ်လုပ်သော polymorphic သည်အရက်မှီခိုသောလူနာများတွင် naltrexone တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2003;28(8):1546–1552. [PubMed]
ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းကိုကုသရာတွင်လိုအပ်သည့် naltrexone ၏ ၂၆။ Kovanen L. , Basnet အက်စ်၊ Castrénအက်စ်။ ။ EUR စွဲ Res ။ 2016;22(2):70–79. [PubMed]
၂၇ ။ Lawrence AJ ။ , Luty J. , Bogdan NA ။ , Sahakian BJ ။ , Clark L. ပြProbleနာလောင်းကစားသူများသည်အရက်ကိုမှီခိုနေရသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဦး နှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်လိုငွေပြမှုကိုမျှဝေကြသည်။ စွဲလမ်း။ 2009;104(6):1006–1015. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
28. Yip SW ။ , Morie KP ။ , Xu J. , et al မျှဝေအမျှင်များကိုဖြတ်ကူးသည့်နေရာများတွင်တွေ့ရှိရသည့်အမူအကျင့်နှင့်ပစ္စည်းစွဲလမ်းမှု၏အသေးစားဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံလက္ခဏာများ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု Cogn neuroscience Neuroimaging ။ 2017;2(2):188–195. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
29. Grant JE ။ , Odlaug BL ။ , Chamberlain SR ။ , et al ။ ကျပန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ -controlled ရုံးတင်စစ်ဆေး N-acetylcysteine ​​ပေါင်းနီကိုတင်း - မှီခိုရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားများအတွက်စိတ်ကူးယဉ် desensitization ။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2014; 75 (1): 3945 ။ [PubMed]
30 ။ Kalivas PW ။ , Volkow ND ။ စွဲလမ်းမှု၏အာရုံကြောအခြေခံ: လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုရောဂါဗေဒ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005;162(2):1403–1413. [PubMed]
31 LaRowe SD က။ , Mardikian P. , Malcolm R. , et al ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်သည်းခံစိတ် Nကိုကိုး - မှီခိုတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် -acetylcysteine ​​။ နံနက် J ကိုစွဲလမ်း။ 2006;15(1):105–110. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
32. LaRowe SD ။ , Myrick H. , Hedden အက်စ်, et al အားဖြင့်လျှော့ချကင်းအလိုဆန္ဒဖြစ်ပါတယ် N-acetylcysteine? နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007;164(7):1115–1117. [PubMed]
33. Nocito Echevarria MA ။ , Andrade Reis T. , Ruffo Capatti G. အ, Siciliano Soares V. , da Silveira DX ။ , Fidalgo TM ။ N- ကိုကင်းစွဲလမ်းမှုကိုကုသရန် acacylcysteine ​​- စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2017; 251: 197-203 ။ [PubMed]
34. Grant JE ။ , ကင်မ် SW ။ , Odlaug BL ။ Nရောဂါဗေဒလောင်းကစားများ၏ကုသမှု -Acetyl cysteine, aglutamate-modulating အေးဂျင့်: ရှေ့ပြေးလေ့လာမှု။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007;62(6):652–657. [PubMed]
35. ကာရိုးကေ, Fenton LR ။ , Ball ကို SA ။ , ကင်း၏မှီခိုပြင်ပလူနာအတွက် disulfiram နှင့်သိမြင် - အမူအကျင့်ကုထုံး၏ et al ထိရောက်မှု။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2004;61(3):264–272. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
36. Froeliger ခ, McConnell PA ဆိုပြီး။ Stankeviciute N. , McClure EA ။ , Kalivas PW ။ Grey KM ။ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ Nဆေးကြောခြင်းနှင့်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းတို့ကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ နှစ်ဆမျက်မမြင်၊ ရလဒ်များအရအိပ်ယာခင်းထိန်းချုပ်ထားသော fMRI ရှေ့ပြေးလေ့လာချက်။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2015; 156: 234-242 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
37 Dowling NA ။ , Merkouris အက်စ်။ , Lorains FK ။ comorbid ပြproblemနာလောင်းကစားခြင်းနှင့်စိတ်ရောဂါရောဂါများအတွက်ကြားဝင်: ဖွံ့ဖြိုးဆဲသုတေသနနယ်ပယ်တိုးတက်။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ။ 2016; 58: 21-30 ။ [PubMed]
38. Slutske WS ။ , Eisen S. , True WR ။ , Lyons MJ ။ , Goldberg J. , Tsuang အမ်။ အမျိုးသားများတွင်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းနှင့်အရက်သေစာမှီခိုခြင်းတို့အတွက်မျိုးရိုးဗီဇအားနည်းခြင်း။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2000;57(7):666–674. [PubMed]
39. Xian အိပ်ချ်, Giddens ဂျေ, Scherrer ဂျေ, Eisen လုပ် SA ။ , Potenza MN ။ ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များသည်ပြdrugနာ / ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ စွဲလမ်း။ 2014;109(4):635–644. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
40. Slutske WS ။ , Ellingson JM ။ Richmond-Rakerd LS ။ , Zhu G. , Martin NG ။ အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်မသန်မစွမ်းသောလောင်းကစားခြင်းနှင့်အရက်သေစာသောက်စားခြင်းရောဂါများအတွက်မျိုးရိုးဗီဇအားနည်းချက်ကိုမျှဝေခြင်း - အမျိုးသားအသိုင်းအဝိုင်းအခြေပြုသြစတြေးလျအမွှာလေ့လာမှုမှသက်သေသာဓကများ။ အမွှာ Res Hum ဗိုလ်ချုပ်ကြီး 2013;16(2):525–534. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
41. Scherrer JF ။ , Xian H. , Kapp JM ။ , et al ကလေးဘဝနှင့်တစ်သက်တာစိတ်ထိခိုက်ဖြစ်ရပ်များနှင့်အမွှာဆောင်များတွင်အတွက်တစ်သက်တာရောဂါဗေဒလောင်းကစားမှုနှင့်ထိတွေ့မှုအကြားအသင်းအဖွဲ့။ J ကိုအာရုံကြော Ment dis ။ 2007;195(1):72–78. [PubMed]
42 Petry မိုင်။ , Steinberg KL ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကုသမှု - ရှာဖွေရန်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများတွင်ကလေးဘဝမတရားပြုမူ။ Psychol စွဲပြုမူနေ။ 2005;19(2):226–229. [PubMed]
43 Slutske WS ။ , Deutsch AR ။ , Statham DB ။ , Martin NG ။ ဒေသခံdisadvantရိယာအားနည်းချက်နှင့်လောင်းကစားဝိုင်းပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်ရောဂါ: ဗီဇ - ပတ်ဝန်းကျင်ဆက်စပ်မှုနှင့်အပြန်အလှန်များအတွက်သက်သေအထောက်အထား။ J ကိုပုံမှန်မဟုတ်သော Psychol ။ 201 5;124(3):606–622. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
44. DE လာ၏။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစား၏မော်လီကျူးမျိုးရိုးဗီဇ။ CNS Spectrum ။ 1998;3(6):20–37.
45. ယန် BZ ။ , Kranzler HR ။ , Zhao အိပ်ချ်, Gruen JR ။ , Luo က X. , haplotypic မျိုးကွဲ၏ Gelernter ဂျေအစည်းအရုံးအတွက် DRD2, ANKK1, TTC12 နှင့် NCAM1 လွတ်လပ်သောအမှု - ထိန်းချုပ်မှုနှင့်မိသားစုနမူနာများတွင်အရက်မှီခိုရန်။ Hum Mol မျိုးရိုးဗီဇ။ 2007;16(23):2844–2853. [PubMed]
46. ​​Gelernter J. , Yu Y. , Weiss R. , et al Haplotype spanning TTC12 နှင့် ANKK1အားဖြင့် flanked DRD2 နှင့် NCAMi loci, နှစ်ခုကွဲပြားအမေရိကန်လူ ဦး ရေအတွက်နီကိုတင်းမှီခိုဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ Hum Mol မျိုးရိုးဗီဇ။ 2006;15(24):3498–3507. [PubMed]
et al 47. Esterlis ဗြဲ, Hillmer ကို AT ။ , Bois ကအက်ဖ် CHRNA4 နှင့် ANKK1 polymorphic ဆေးလိပ်သောက် - သွေးဆောင်နီကိုတင်း acetylcholine အဲဒီ receptor upregulation သြဇာလွှမ်းမိုး။ နီကိုတင်းတောဘ Res ။ 2016;18(9):1845–1852. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
dopamine-receptor 48 ဗီဇ၏ DNA-methylation တွင် 2. Hillemacher T. , Frieling H. , Buchholz V. , et al Alterations ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း၏တစ်သက်တာသမိုင်းနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် abstinence နှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအသုံးချနှင့်ဆက်စပ်နေကြသည်။ prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2015; 63: 30-34 ။ [PubMed]
impulsivity နှင့်ပတ်သက်။ 49. Hillemacher တီ, Frieling အိပ်ချ်, Buchholz V. , et al Dopamine-receptor2ဗီဇ -Metylation နှင့်လောင်းကစားအပြုအမူ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2016; 239: 154-155 ။ [PubMed]
50. Lind PA ။ , Zhu G. အ၊ Montgomery GW ။ et al Genome - ကျယ်ပြန့်သောအသင်းအဖွဲ့ဆိုင်ရာလေ့လာမှုအားဖြင့်လောင်းကစားခြင်းလက္ခဏာကိုလေ့လာခြင်း။ စွဲဇီဝဗေဒ။ 2013;18(3):511–522. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ရောဂါဗေဒလောင်းကစား၏ 51. Lang အမ်, Lemenager တီ, Streit အက်ဖ်, et al Genome- ကျယ်ပြန့်အသင်းအဖွဲ့လေ့လာမှု။ EUR စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2016; 36: 38-46 ။ [PubMed]
52. Potenza MN ။ , Hollander E. ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှုထိန်းချုပ်မှုရောဂါ။ ခုနှစ်တွင်: Davis က K ကို, Charney: D, Coyle JT, Nemeroff ကို C, eds ။ Neuropsychopharmacology: တိုးတက်မှု၏ 5th Generation ။ Philadelphia တွင်, PA: Lippincott ဝီလျံ, & Wilkins; 2002
53 ။ Potenza MN ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းသို့မဟုတ်လောင်းကစားရောဂါမှ dopamine ဘယ်လိုအလယ်ပိုင်းရှိသနည်း တပ်ဦးစှာနထေိုငျ neuroscience ။ 2013; 7: 206 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
54 Nutt DJ သမား။ , Lingford-Hughes A. , Erritzoe D. , Stokes PR ။ dopamine စွဲလမ်းမှုသီအိုရီ - အနှစ် ၄၀ အတွင်းအမြင့်ဆုံးနှင့်အနိမ့်အမြင့်။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2015;16(5):305–312. [PubMed]
55 Matuskey D. , Gallezot JD ။ , Pittman ခ, et al Dopamine D3 PET ligand နှင့်အတူကိုကင်းကိုကိုးမှီခိုလူသားများတွင် receptor ပွောငျးလဲ [11ကို C] (+) PHNO ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2014; 139: 100-105 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
56. Worhunsky PD ။ , Matuskey,, Gallezot JD ။ , et al ။ ကိုကာကိုင်းအသုံးပြုမှုရောဂါရှိ dopamine D2 / D3 receptors ၏ဒေသဆိုင်ရာနှင့်ကွန်ယက်အခြေပြုပုံစံများ။ Neuroimage ။ 2017; 148: 343-351 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
57. ပေးဆောင်သူ။ , Behzadi အေ, Kish SJ ။ , et al Heightened3 [XNUMX] ကိုကင်းမှီခိုမှုနှင့်စွဲလမ်းမှုအမူအကျင့်ဆိုင်ရာ phenotype အတွက်ပံ့ပိုးမှုများအတွက် dopamine receptor level: [နှင့်အတူ] positron ထုတ်လွှတ်မှု tomography လေ့လာမှု11ကို C] - (+) PHNO ။ Neuropsychopharmacology. 2014;39(2):311–318. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
dopamine: D ၏ 58. Boileau ဗြဲ၊ ပေးဆောင်သူ၊ Houle အက်စ်3 အဲဒီ receptor - ကြိုက်တတ်တဲ့ ligand [11C] - (+) - methamphetamine polydrug အသုံးပြုသူများအတွက် PHNO: positron ထုတ်လွှတ်မှု tomography လေ့လာမှု။ J ကို neuroscience ။ 2012;32(4):1353–1359. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 59. Boileau ဗြဲ, ပေးဆောင် er, Chugani ခ2 /3ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းထဲမှာ dopamine အဲဒီ receptor: နှင့်အတူ positron ထုတ်လွှတ် tomography လေ့လာမှု [11ကို C] (+) - propyl-hexahydro-naphtho-oxazin နှင့် [11ကို C] raclopride ။ စွဲလမ်း။ 2013;108(5):953–963. [PubMed]
Parkinsonian လူနာများအတွက်လောင်းကစားဝိုင်းများနှင့်အတူ Striatal dopamine ထုတ်လွှတ်မှုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ 60. Steeves TDL, Miyasaki J. , Zurowski M.11ကို C] PET လေ့လာမှု raclopride ။ ဦးနှောက်။ 2009;132(pt 5):1376–1385. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအတွက်လောင်းကစားသမားများအတွက်ပါးစပ်အမ်ဖက်တမင်းစိန်ခေါ်မှုအပြီးတွင် ၆၁ Mick I. , Myers J. , Ramos AC ။ Neuropsychopharmacology ။ 2016;41(7):1742–1750. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
လောင်းကစားရောဂါ GABA- တစ် ဦး ကအဲဒီ receptor dysregulation များအတွက် 62. Mick ဗြဲ, Ramos AC အ, Myers ဂျေ, et al အထောက်အထား: Impulse နှင့်အတူဆက်စပ်မှု။ ။ စှဲလမျးသူ Biol ။ ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏ 2016 အောက်တိုဘာ 13 Epub ။ Doi: 10.1111 / adb.12457 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
63 ။ Leeman RF ။ , Potenza MN ။ တူညီခြင်းနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အကြားကွဲပြားခြားနားမှု: Impulse နှင့် compulsive အပေါ်တစ်ဦးအာရုံ။ Psychopharmacology (အိပ်ရာ) ။ 2012;219(2):469–490. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
64. Leeman RF ။ , Potenza MN ။ neurobiology နှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှု၏မျိုးရိုးဗီဇကိုတိကျစွာပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - ထွန်းသစ်စသုတေသနနယ်ပယ်။ J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှုနိုင်သလား။ 2013;58(5):260–273. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
65. Choi JS ။ , Shin YC ။ , Jung WH ။ , et al ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းနှင့်စွဲလမ်း - compulsive ရောဂါအတွက်ဆုလာဘ်မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုပြောင်းလဲ။ PLoS တစ်ခုမှာ။ 2012;7(9): e45938 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
66. Balodis IM ။ , Kober အိပ်ချ်၊ Worhunsky PD ။ စတီဗင် MC ။ ၊ Pearlson GD ။ , Potenza MN ။ ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်များနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်ဆုံးရှုံးမှုများလုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း frontostriatal လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွားသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2012;71(8):749–757. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
လောင်းကစားရောဂါ၌အားထုတ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲအတွက်ကြိုးပမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲအတွက် 67. Fauth-Bühlerအမ်၊ Zois အီး၊ Vollstadt-Klein အက်စ်, Lemenager တီ၊ Beutel အမ်၊ မန်းကေ Insula နှင့် striatum လှုပ်ရှားမှု။ Neuroimage Clin ။ 2014; 6: 243-251 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
68 Balodis IM ။ , Potenza MN ။ စွဲလူ ဦး ရေအတွက်မျှော်လင့်စောင့်စားအပြောင်းအလဲနဲ့: ငွေကြေးမက်လုံးပေးနှောင့်နှေးအလုပ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2015;77(5):434–444. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဆုကိုမျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း 69 Beck အေ, Schlagenhauf အက်ဖ်, Wustenberg တီ, et al Ventral striatal activation အရက်သမားအတွက် Impulse နှင့်ဆက်နွယ်နေကြောင်း။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009;66(8):734–742. [PubMed]
70. Potenza MN ။ , Leung HC ။ , Blumberg HP ။ , et al ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေအတွက် ventromedial prefrontal cortical function ကိုတစ်ခု fMRI Stroop လေ့လာမှု။ နံနက် - J စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003;160(11):1990–1994. [PubMed]
71 Potenza MN, Steinberg MA, Skudlarski P. , et al Gambling သည်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားများအားတိုက်တွန်းသည်။ fMRI လေ့လာမှုတစ်ခု။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003;60(8):828–836. [PubMed]
72. Tanabe ဂျေ, Thompson ကအယ်လ်, ကလော့စအီး, Dalwani အမ်, Hutchison K. , Banich MT ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချစဉ်အတွင်းလောင်းကစားခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းများမပြုလုပ်မီ prefrontal cortex လှုပ်ရှားမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ Hum ဦးနှောက် Mapp ။ 2007;28(12):1276–1286. [PubMed]
73. Reuter J. , Raedler T. , Rose M. , Hand I. , Glascher J. , Buchel C. ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသည် mesolimbic ဆုလာဘ်စနစ်လျှော့ချခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ နတ် neuroscience ။ 2005;8(2):147–148. [PubMed]
74 Limbrick-Oldfield EH ။ , Mick ဗြဲ၊ RE Cocks ။ ။ လောင်းကစားမသန်မစွမ်းမှုအတွက် cue ဓာတ်ပြုမှုနှင့်တဏှာ၏ Neal အလွှာများ။ ဘာသာပြန်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2017;7(1): e992 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
75 Kober အိပ်ချ်, Lacadie C. , Wexler BE ။ , Malison RT ကို။ , Sinha R. , Potenza MN ။ ကိုကင်းတွန်းအားပေးခြင်းနှင့်လောင်းကစားခြင်းများတွင် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှု - fMRI လေ့လာမှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2016;41(2):628–637. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
76. ယန် BZ ။ , Balodis IM ။ , Lacadie CM ။ , Xu ဂျေ, Potenza MN ။ DBH (encoding dopamine beta-hydroxylase) မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းနှင့်မပါဘဲတစ် ဦး ချင်းစီ၏စိတ်ခံစားမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲ၏ပဏာမလေ့လာမှု။ J ကိုပြုမူနေစွဲ။ 2016;5(2):282–292. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
77. Grant JE ။ , Odlaug BL ။ , Chamberlain SR ။ , Hampshire ပြည်နယ်အေ၊ Schreiber LR ။ , Kim SW ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းအဘို့အ tolcapone ၏အယူအဆလေ့လာမှု၏သက်သေအထောက်အထား: COMT genotype နှင့် ဦး နှောက် activation နှင့်အတူဆက်ဆံရေး။ EUR Neuropsychopharmacol ။ 2013;23(11):1587–1596. [PubMed]
78. Guillot CR ။ , Fanning JR ။ , Liang T. , Bermand ME ။ ရှုပ်ထွေးသောလောင်းကစားခြင်းနှင့်သောက်စားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော COMT အသင်းအဖွဲ့များ။ J ကို Gamble လုံး။ 2015;31(2):513–524. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
79. Worhunsky PD ။ , Malison RT ။ , Rogers RD ။ , Potenza MN ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်ကင်းမှီခိုအတွက် simulated slot က - စက် fMRI စဉ်အတွင်းဆုလာဘ်များနှင့်အရှုံးအပြောင်းအလဲနဲ့၏ပြောင်းလဲအာရုံကြောဆက်စပ်မှု။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2014; 145: 77-86 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
80. Worhunsky PD ။ , Potenza MN ။ , Rogers RD ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းနှင့်ကိုကင်းမှီဝဲခြင်းတို့တွင်ဆုံးရှုံးမှု - ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအလုပ်လုပ်သော ဦး နှောက်ကွန်ယက်များ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2017; 178: 363-371 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
81. Yip SW ။ , Worhsunky PD ။ , Xu J. ၊ et al Grey-ကိစ္စဆက်ဆံရေးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အမူအကျင့်စွဲမှု၏ transdiagnostic အင်္ဂါရပ်များနှင့်ဆက်ဆံရေး။ စွဲ Biol ။ ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏ 2017 ဖေဖော်ဝါရီ 1. Epub ။ Doi: 10 ။ 111 1 / adb ။ 12492 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
82 Beveridge TJ ။ , Gill KE ။ , Hanlon CA. , Porrino LJ ။ လူသားများနှင့်မျောက်များတွင်ကိုကင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအာရုံကြောဆိုင်ရာနှင့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုလေ့လာခြင်း။ Phil Trans တော်ဝင် Soc B. 2008;363(1507):3257–3266. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
83. Insel T. , Cuthbert B. , Garvey M. , et al Research Domain Criteria (RDoC): စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်သုတေသနအတွက်ခွဲခြားမူဘောင်အသစ်ဆီသို့။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2010;167(7):748–751. [PubMed]
84. Yip SW ။ , Potenza MN ။ ကလေးသူငယ်နှင့်ဆယ်ကျော်သက်စိတ်လိုက်မာန်ပါနှင့်စွဲလမ်းစေသောရောဂါများအတွက်သုတေသနဒိုမိန်းသတ်မှတ်ချက်ကိုအသုံးပြုခြင်း - ကုသမှုအတွက်ဂယက်ရိုက်ခြင်း။ Clin Psychol ဗျာ ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏ 2016 နိုဝင်ဘာ9Epub ။ Doi: 10.1016 / j.cpr.2016.11.003 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ကွန်ပျူတာအသုံးပြုမှု၏ 85. လူငယ် K. စိတ်ပညာ: XL ။ အင်တာနက်ကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းအသုံးပြုခြင်း။ Psychol ကိုယ်စားလှယ်။ 1996; 79 (3 PT 1): 899-902 ။ [PubMed]
86. Petry မိုင်၊ အိုဘရိုင်ယန်စီပါ။ အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့် DSM-5 ။ စွဲလမ်း။ 2013;108(7):1186–1187. [PubMed]
87. အမှတ်တံဆိပ်အမ်, လူငယ် K. , Laier C. , Wölfling K. , Potenza MN ။ တိကျသောအင်တာနက်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် neurobiological ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများကိုပေါင်းစပ်ခြင်း - Person-Affect-Cognition-Execution (l-PACE) မော်ဒယ်၏အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2016; 71: 252-266 ။ [PubMed]
88. Aarseth E. , Bean AM ။ , Boonen H. , နှင့်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ICD-11 Gaming Disorder အဆိုပြုချက်နှင့်ပတ်သက်သော Scholars ၏ပွင့်လင်းသောဆွေးနွေးငြင်းခုံစာတမ်း။ J ကိုပြုမူနေစွဲ။ 2016 ဒီဇင်ဘာ 30: 1-4 ။ ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ် Epub ။ Doi: 10.1 556 / 2006.5.2016.088 ။
89. Saunders JB, Hao W. , Long J. , et al Gaming disorder: ရောဂါရှာဖွေခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်းအတွက်အရေးကြီးသောအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။ J ကိုပြုမူနေစွဲ။ စာနယ်ဇင်းများတွင် [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
90. Banz B. , Yip SW ။ , Yau YHC ။ , Potenza MN ။ စွဲဆေးပညာအပြုအမူစွဲ: ယန္တရားကနေလက်တွေ့ကျတဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်။ prog ဦးနှောက် Res ။ 2016; 223: 311-328 ။ [PubMed]
91. Fauth-Bühlerအမ်၊ မန်းကေ Neurobiological ဆက်စပ်မှုအင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်း။ ရောဂါလောင်းကစားခြင်းနှင့်တူညီသည်။ စှဲလမျးသူပြုမူနေ။ 2017; 64: 349-356 ။ [PubMed]
92. Wölfling K. , Beutel ME ။ , Dreier အမ်၊ Muller KW ။ အင်တာနက်စွဲနှင့်အတူလူနာအတွက်ကုသမှုရလဒ်များ: တစ်သိမြင် - အပြုအမူကုထုံးအစီအစဉ်၏သက်ရောက်မှုအပေါ်တစ် ဦး လက်တွေ့ရှေ့ပြေးလေ့လာမှု။ Biomed Res Int ။ 2014; 2014: 425-924 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
93. Zhang JT ။ , Yao YW ။ , Potenza MN ။ , et al အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းရောဂါရှိ cue- သွေးဆောင်တပ်မက်ခြင်း၏အာရုံကြောအလွှာအပေါ်အမူအကျင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု၏တွန်းအား။ Neuroimage Clin ။ 2016; 12: 591-599 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
94. Zhang JT ။ , Yao YW ။ , Potenza MN ။ , et al ။ ပြောင်းလဲသွားသောအနားယူခြင်း - ပြည်နယ်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုနှင့်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းရောဂါအတွက်တဏှာအပြုအမူဆိုင်ရာကြားဝင်ဖြန်ဖြေမှုအပြီးတွင်ပြောင်းလဲမှုများ။ သိပ္ပံကိုယ်စားလှယ်။ 2016; 6: 28109 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
95. Dong G. အ, Potenza MN ။ အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းရောဂါ၏သိမြင်မှု - အပြုအမူပုံစံ - သီအိုရီအရအခြေခံနှင့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှုများ။ J ကိုစိတ်ရောဂါ Res ။ 2014; 58: 7-11 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
96. Dong G. အ, Lin X တို့၊ Potenza MN ။ အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုကွန်ယက်တစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်သောဆက်သွယ်မှုကျဆင်းခြင်းသည်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းတွင်အလုပ်အကိုင်အားနည်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2015; 57: 76-85 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းမသန်မစွမ်းသူများအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်အန္တရာယ်ရှိသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အချိန်တွင် Liu L. , Xue G. , Potenza MN ။ et al Dissociable အာရုံကြောလုပ်ငန်းစဉ်ပြောင်းလဲခြင်း။ Neuroimage Clin ။ 2017; 14: 741-749 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
98. Krueger RB ။ hypersexual သို့မဟုတ် compulsive လိင်အပြုအမူကိုရှာဖွေခြင်းကိုအမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်းကဤရောဂါကိုငြင်းပယ်ခဲ့သော်လည်း ICD-10 နှင့် DSM-5 ကို အသုံးပြု၍ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ စွဲလမ်း။ 2016;111(12):2110–2111. [PubMed]
99. Kor အေ, Fogel Y. , Reid R. , Potenza MN ။ hypersexual Disorder ကိုစွဲလမ်းမှုအဖြစ်သတ်မှတ်သင့်သလား။ လိင်အကျင့်စွဲခြင်း။ 2013;20(1-2). doi:10.108 0/10720162.2013.768132. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
100. Kraus SW ။ , Voon V. , Potenza MN ။ compulsive လိင်အပြုအမူတစ်ခုစွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သလဲ စွဲလမ်း။ 2016;111(12):2097–2106. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
101. Kraus SW ။ , Voon V. , Potenza MN ။ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ Neurobiology: ထွန်းသစ်စသိပ္ပံ။ Neuropsychopharmacology ။ 2016;41(1):385–386. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
102. Voon V. , Mole T. , Banca P. , et al Neural သည်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်မလိုက်နာသူများအားလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ PLoS တစ်ခုမှာ။ 2014;9(7): e102419 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
103. Gola အမ်, Wordecha အမ်, Sescousse G. အ, et al ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းစေနိုင်သလား? ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကုသမှုခံယူလိုသောအမျိုးသားများအတွက် fMRI လေ့လာချက်။ Neuropsychopharmacology ။ ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏ 2017 Aprပြီ 14 Epub ။ Doi: 10.1038 / npp.2017.78 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
104. Mechelmans DJ ။ , Irvine အမ်၊ Banca P. နှင့် et al မတည်မငြိမ်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်မပါဘဲတစ် ဦး ချင်းစီရှိလိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအချက်များကိုအာရုံစိုက်သည်။ PLoS တစ်ခုမှာ။ 2014;9(8): e105476 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
105. Banca P. , Morris LS ။ , Mitchell S. , Harrison NA ။ , Potenza MN ။ , Voon V. Novelty, အေးစက်ခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာဆုကျေးဇူးများကိုဂရုပြုခြင်းဘက်လိုက်မှု။ J ကိုစိတ်ရောဂါ Res ။ 2016; 72: 91-101 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
106. Kraus SW ။ , Meshberg-Cohen အက်စ်, Martino အက်စ်, Quinones LJ ။ , Potenza MN ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကို naltrexone ဖြင့်ကုသခြင်း - ဖြစ်ရပ်မှန်အစီရင်ခံစာ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2015;172(12):1260–1261. [PubMed]
107. Potenza MN ။ အမူအကျင့်စွဲကိစ္စသည်အရေးကြီးသည်။ သဘာဝ။ 2015; 522 (7557): S62 ။ [PubMed]